Lufthansa dia manolotra ny vahaolana IT ho an'ny tolotra maharitra amin'ny fivezivezena sy fivezivezena
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Alemana » Lufthansa dia manolotra ny vahaolana IT ho an'ny tolotra maharitra amin'ny fivezivezena sy fivezivezena
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Miaraka amin'ny Squake, ny vondrona nomerika nomerika an'ny Lufthansa Group dia manangana sehatra onitra CO2 natokana ho an'ireo orinasa avy amin'ny indostrian'ny dia, fivezivezena ary fitaterana iray manontolo.
Ny vahaolana IT vaovao dia ahafahan'ny orinasa mampiditra ny tolotra maharitra ho an'ny mpanjifa ao amin'ny portfolio-ny vokatra.
Ny sehatra dia manohana ny fanatratrarana tanjona kendrena fampihenana CO2 ary hanafaingana ny tetezamita mankany amin'ny fivezivezena maharitra.
Ny orinasa dia afaka mampifangaro ny interface Squake amin'ny vavahadin-tserasera manokana.
Ny mpanjifa dia mitaky hatrany ny tolotra maharitra amin'ny fivezivezena sy ny fivezivezena. Mandritra izany fotoana izany dia mitady fomba hahatratrarana ny tanjon'izy ireo maharitra koa ny orinasa. Ny Hub Lovthansa Innovation Hub dia miresaka an'ity fangatahana mitombo ity amin'ny vahaolana vaovao.
Miaraka amin'ny Squake, ny Vondrona LufthansaNy ivon-toerana nomerika nomerika dia manangana sehatra onitra CO2 natokana ho an'ireo orinasa avy amin'ny indostrian'ny dia, fivezivezena ary fitaterana. Amin'ny alàlan'ny fampiasana rindranasa rindrambaiko fampiharana (API) dia afaka manisa sy mametra mora foana ny fandefasana CO2 amin'ireo serivisy natolony ireo orinasa ankehitriny. Ny vahaolana vaovao dia mamela azy ireo hamolavola vokatra maharitra maharitra mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifany.
“Ny tsenan'ny dia sy ny fivezivezena dia mitady vahaolana mahomby hampitomboana ny faharetana. Ny valinay manoloana izany dia ny fanombohana ny teknolojia momba ny toetr'andro, izay manampy ny orinasa hanafaingana ny fivelaran'ny vokatra maharitra ", hoy i Christine Wang, talen'ny fitantanana Lufthansa Innovation Hub. "Miaraka amin'ny Squake, azonay atao ny manamboatra ny fahalalantsika offsetting mihoatra ny fiaramanidina. Tsy misy afa-tsy ny faharetana maharitra raha toa ka miara-miasa isika, ka izany no ianteherantsika amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny tsena sy eo amin'ireo orinasa mpandray anjara. Ny vinanay ho an'ny Squake dia ny hanomezana 'hazondamosina haitao maitso' ho an'ny dia sy fivezivezena. ”
Ity ny fomba fiasan'ny Squake
Rehefa mamandrika dia lavitra amin'ny alàlan'ny fomba fitaterana samihafa ny mpanjifa sampan-draharaha misahana ny dia an-tserasera (OTA), ohatra ny fiara manofa, sidina, sambo, bus, dia manisa avy hatrany ny entona CO2 amin'ny diany manontolo ilay sehatra. Avy eo ny mpanjifa dia afaka manonitra ireo fandefasana entana voaisa mandritra ny fizotran'ny famandrihana.
Ny orinasa dia afaka mampifangaro ny interface Squake amin'ny vavahadin-tserasera manokana. Midika izany fa afaka manolotra "tahan'ny maintso" avy hatrany izy ireo na manao ny atiny manontolo CO2-tsy miandany. Ny startup eropeana voalohany avy amin'ny fitantanana ny dia, ny fivezivezena iraisana ary ny lozisialy dia efa mahomby amin'ny fampiasana ny serivisy.
"Ny fahaiza-mahomby sy ny faharetana dia mila miara-miasa," hoy i Dan Kreibich, mpitarika ny tetikasa Squake. “Manampy ireo orinasa izahay mba hanana tolotra maharitra amin'ny fotoana fohy indrindra mifanaraka amin'ny tarigetran'izy ireo. Resy lahatra izahay fa ny vokatra maharitra dia mandray anjara amin'ny fitomboan'ny varotra. ”